Zimbabwe: Chinese President Hails Sino-Zim Relations
Congratulatory messages from world leaders continued to pour in yesterday on the occasion of Zimbabwe's Independence Day with Chinese President Xi Jinping saying the trade, economic and cultural relations between Harare and Beijing have generated positive results.
The message from President Xi comes after other world leaders on Monday took time to congratulate the country for attaining 37 years of independence with Russia's President Vladimir Putin saying the relations between Harare and Moscow should be strengthened in line with Russia's thrust to strengthen security and stability in Africa.
The solidarity messages came as the country celebrated its 37th independence anniversary yesterday under the theme: [email protected]
"On the occasion of the 37th anniversary of the Independence of the Republic of Zimbabwe, I wish to extend, on behalf of the Chinese Government and people as well as in my own name, to you and through you to the Zimbabwean Government and people, my sincere greetings and best wishes," said President Xi.
"China and Zimbabwe have long enjoyed deep traditional friendship and have always treated each other with sincerity on an equal basis.
"Our two countries have all along extended mutual understanding and support to each other on the issues regarding core interests and major concerns.
"Our exchanges in trade, economic, cultural and other fields have yielded fruitful achievements.
"I always attach great importance to the development of China-Zimbabwe relations.
"I am ready to work together with you to continuously deepen our bilateral friendship and win-win co-operation across the field and lift our bilateral relations to new heights.
"I wish Zimbabwe prosperity and its people happiness," he said.
Zimbabwe: Why Do So Many Want to Be President?
Zimbabwe: President Descends On Gwanda
Zimbabwe: Presidential Candidate Munyanduri Promises Bacon, Egg and Milk
Zimbabwe: We Want Issues-Driven Leaders, Says Opposition Leader Mangoma
Southern Africa: SADC Ministerial Committee to Meet
Zimbabwe: Mnangagwa Inspires Renewed Hope in Masvingo
Zimbabwe: All in Place for Free, Fair Polls - Mnangagwa
Zimbabwe: Presidential Hopeful Moyo Launches Election Manifesto
Zimbabwe: Let's Be the Change We Want, Says Prominent Lawyer Mahere
Zimbabwe: Opposition Overwhelmed By New Dispensation
Zimbabwe: We Deserve More Time to Rebuild Economy - VP Chiwenga
Zimbabwe: Car Dealer Swindles Over 50 People of Cash
Zimbabwe: Dynamos, Highlanders Coaches for Spain
Zimbabwe: Limping Dynamos to Reinforce Squad
Zimbabwe: Tennis Players in African Junior Teams Champs
Zimbabwe: Italian Football Icon Zambrotta Impressed By Local Legends
Zimbabwe: What You Need to Know About Internet Addiction